Setimadi Dainikविचार Archives - Setimadi Dainik
डम्बर अधिकारी सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने यति बेला पारिवारिक सम्बन्धका कारण सञ्चार माध्यम देखि सामाजिक सञ्चालमा हट केक बनिरहेका छन् । सायद ,सामान्य नागरिक भएको भए पारिवारिक सम्बन्धका कारण लामिछानेको पारिवारिक सम्बन्धको विषय हट केक हुने थिएन । सेलिब्रेटी भएका कारण उनको पारिवारिक सम्बन्धका विषय हट केक बन्न पुगेको हो । […]
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुझावः धार्मिक मठ मन्दिर भन्दा संसदीय राजनीतिको बाटो रोज्दा के हुन्छ ?
डम्बर अधिकारी म केटाकेटी हुँदा साथीभाईले भनेको सुनेको थिए । क बाट सुरु भएको नेपालको शाहवंश ज्ञ मा पुगेर अन्त्य हुनेछ । नभन्दै कुलमण्डल शाहबाट सुरु भएको नेपालको शाह वंशको अन्त्य ज्ञानेन्द्र शाहको शासन पालामा अन्त्य हुन पुग्यो । अर्थात जनताको मतबाट निर्वाचित संविधान सभा सदस्यहरुले पहिलो संविधान सभा मार्फत […]
डम्बर अधिकारी निर्दलीय पञ्चायतका नायक र लोकतन्त्रका खलनायक भनेर चित्रित गरिएका डा. तुलसी गिरी मंगलबार देखि यस धर्तिबाट बिदा भएका छन् ।यस दुःखद घडीमा सर्वप्रथम त स्वर्गीय गिरी प्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दे शोकसन्तप्त परिवार प्रति हार्र्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु । खासगरी महामानव विपी कोइरालाको सम्र्पकबाट नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका […]
डा. गिरीको अन्तिम दाहसंस्कार पशुपतिमा गर्न दिनु कति जायज ?
काग्रेसको जारी महासमिति बैठक र वहसमा हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा
डम्बर अधिकारी नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्दे आईरहेको पार्टी नेपाली काग्रेसको महासमिति बैठक राजधानीमा जारी रहेको छ । शनिबार देखि शुरु भएको महासमिति बैठकमा देश विदेशबाट गरी २ हजार भन्दा बढी महासमिति सदस्यहरुले सहभागिता जनाई रहेका छन् । विधानत नेपाली काग्रेसको महासमिति बैठक प्रत्येक बर्ष हुनुपर्ने हो […]
सहज ढंगले न्याय सम्पादन गर
मुलुक संघीय संरचना गएसगै न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहमा पुगेको छ ।जसअनुसार महानगरपालिका , नगरपालिका र गाउँपालिका भित्रका विभिन्न विवादित विषयका बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले न्याय सम्पादन गर्दे आईरहेका छन् ।यसरी स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले न्याय सम्पादन कार्य गर्दे गर्दा न्याय सम्पादनमा धेरै नै सहजता हुन थालेको छ […]
काग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको युरोप भ्रमण ः गुट विस्तार कि मूड फ्रेस ?
डम्बर अधिकारी नेपाली काग्रेसका वरिष्ठ नेता यतिबेला यूरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली जनसम्पर्क समितिद्धारा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा सहभागी भईरहेका छन् । काग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको स्वकीय सचिवालयद्धारा जारी विज्ञप्ती २५ सेप्टेम्बर सम्म आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर २६ सेप्टेम्बरमा नेपाल फर्कन कार्यक्रम रहेको छ । यो बीचमा वरिष्ठ नेता पौडेल ब्रसेल्स ,लग्जम्बर्ग […]
लण्डन ,थेम्स रिभर र हाम्रो व्यास नगर
डम्बर अधिकारी केही बर्ष अगाडि घुम्नका लागि म लण्डन गएको थियो । लण्डन मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको संसार थियो । जब हिद्रो विमानस्थलमा म अवतरण गर्दे थिए । त्यहाँका हरेक दृश्यले मलाई प्रभावित पारिरहेको थिए ।झण्डै एक महिना बसाईका क्रममा लण्डनलाई नजिकबाट नियाल्ने अबसर मैले पाएको थिए । त्यहाँका दृश्यहरु […]
प्रकाश अधिकारी सयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई ) मा भदौ ७, ८ र ९ गते सम्पन्न एनआरएन छैटौं मध्यपूर्व सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको हिसाबले सहभागिता हुने अवसर मिलेको थियो । सो सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर मिल्दै गर्दे सयुक्त अरब इमिरेटस्लाई नजिकबाट नियालेर अवसर मिल्यो। भौगालिक हिसाबमा सयुक्त अरब इमिरेट्स सात राज्य मिलेर बनेको […]